Lixda marxaladood ee Safarka Iibsadaha B2B | Martech Zone
Waxaa jiray maqaallo badan oo ku saabsan safaradii iibsadaha ee dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyo sida ganacsiyada ay ugu baahan yihiin inay si dijitaal ah u beddelaan si ay ula qabsadaan isbeddelada ku dhaca hab-dhaqanka iibsadaha. Wejiyada uu iibsade ku dhex marayo waa arrin muhiim u ah guud ahaan iibkaaga iyo istaraatiijiyada suuqgeynta si loo hubiyo inaad siineyso macluumaadka rajada ama macaamiisha meesha iyo goorta ay raadinayaan.
In Cusbooneysiinta Gartner ee CSO, Waxay qabtaan shaqo fantastik ah oo ah kala soocida iyo faahfaahinta sida iibsadayaasha B2B uga shaqeeyaan iyada oo loo marayo arrinta illaa iibsashada xalka. Maaha iibka funnel in shirkadaha badankood qaateen oo ay cabiraan. Waxaan ku dhiiri gelin lahaa qof walba inuu isdiiwaangaliyo oo soo dejiyo warbixinta
Download: Socdaalka Iibsiga B2B ee Cusub iyo Saamaynta uu ku leeyahay Iibka
Marxaladaha Safarka ee Iibsadaha B2B
Aqoonsiga Dhibaatada - ganacsigu wuxuu leeyahay arrin ay isku dayayaan inay saxaan. Waxyaabaha aad ku bixiso marxaladan waa inay ka caawisaa inay si buuxda u fahmaan dhibaatada, qiimaha ay ku fadhido ururkooda, iyo soo noqoshada maalgashiga xalka. Waqtigan xaadirka ah, xitaa ma raadinayaan alaabooyinkaaga ama adeegyadaada - laakiin joogitaanka iyo bixinta khibrada iyaga si ay si buuxda u qeexaan dhibaatadooda, waxaad horayba uga soo baxday albaabka iyada oo u muuqata adeeg bixiye xallin.
Sahaminta Xalka - hadda markay ganacsigu fahmeen dhibaatadooda, hadda waa inay raadiyaan xalka. Tani waa halka xayeysiinta, raadinta, iyo warbaahinta bulshada ay muhiim u yihiin ururkaaga lala soo xiriirayo. Waa inaad goobjoog ka ahaataa raadinta leh waxyaabo la yaab leh oo ku siin doona kalsoonida rajadaadu u baahan tahay inaad tahay xal wax ku ool ah. Sidoo kale waa inaad lahaataa koox iib ah oo firfircoon iyo u doodayaal goobjoog ka ah halkaasoo rajooyinkaaga iyo macaamiishaadu ay ka codsanayaan macluumaadka baraha bulshada.
Shuruudaha Dhisida - ganacsigaagu waa inuusan sugin codsi soo-jeedin si loo faahfaahiyo sida aad gacan uga geysato fulinta shuruudaha. Haddii aad ka caawin karto rajadaada iyo macaamiishaada inay qoraan shuruudahooda, waad ka hormari kartaa tartankaaga adoo iftiiminaya awoodaha iyo faa'iidooyinka dheeraadka ah ee la shaqeynta ururkaaga. Tani waa aag aan had iyo jeer diirada saaro macaamiisha aan caawinay. Haddii aad qabato shaqada adag ee ka caawinta iyaga abuuritaanka liistada hubinta, fahmidda jadwalka, iyo qiyaasta saameynta xalka, waxaad si dhaqso leh ugula socon doontaa madaxa liiska xalka.
Xulista Alaab-qeybiye - Websaydhkaaga, joogitaankaaga raadinta, joogitaankaaga warbaahinta bulshada, markhaatifurkaaga macmiilka, kiisaskaaga isticmaalka, aragtidaada hoggaamineed ee fikirkaaga, shahaadooyinkaaga, ilahaaga, iyo aqoonsi warshadeed dhammaantood waxay kaa caawinayaan inaad rajo geliso inaad shirkad tahay waxay rabaan inay ganacsi la yeeshaan. Shirkaddaada xiriirka dadweynaha waxay u baahan tahay inay dusha ka saarto hubinta in marwalba lagugu sheego daabacadaha warshadaha iyada oo ah shirkad la aqoonsan yahay oo ah alaabooyinka iyo adeegyada ay iibsaduhu baarayaan alaab-qeybiyeyaasha. Ganacsatada wax iibsada waxaa laga yaabaa inay la socdaan xal aan ku dhicin dhammaan calaamadaha… laakiin inay ogyihiin inay aamini karaan. Tani waa marxalad muhiim u ah kooxdaada suuq-geynta.
Xaqiijinta Xalka - Wakiilada horumarinta ganacsiga (Bdr) ama xalalka wakiilada horumarinta (JDS) waa aqoonyahan isku toosinaya baahida macaamilka iyo dejinta rajooyinka ku saabsan awooddooda gaarsiinta xalka. Daraasadaha kiiska ee la jaan qaadaya warshadaha rajadaada iyo qaangaarnimada ayaa lagama maarmaan u ah halkan si rajadaadu aragti ahaan ugu aragto in xalkaagu awood u leeyahay xallinta dhibaatadooda. Shirkadaha leh ilaha waxay xitaa maalgalin karaan noocyo horudhac ah waqtigan si rajadu u aragto inay ka fekereen xalka.
Abuurista Wadajirka - Ganacsiga dhexdiisa, marar dhif ah ayaan la shaqeynaa go'aanka. Badanaa maahan, go'aanka iibsiga waxaa loo daayaa kooxda kooxda hoggaamineysa ka dibna la oggolaadaa. Nasiib darrose, badanaa ma helno marin kooxda oo dhan ah. Wakiillada iibinta qaangaarka ah ayaa si buuxda u fahmay tan waxayna tababari karaan xubinta kooxda sida loo soo bandhigo xalkooda, loo kala sooco ganacsigooda tartanka, iyo in laga caawiyo kooxda inay ka gudubto habka oggolaanshaha.
Marxaladahaani had iyo jeer si is daba joog ah uma socdaan. Ganacsiyadu badanaa waxay ku shaqeyn doonaan hal ama dhowr marxaladood, wax ka beddelaan shuruudaha, ama ballaadhiyaan ama yareeyaan diiradooda markay ku sii siqayaan iibsashada. Hubinta in iibkaaga iyo suuqgeyntaadu ay labaduba iswaafajiyeen oo ay rogrogmi karaan si loo waafajiyo isbedeladaas ayaa muhiim u ah guushaada.
U Guurista Safarka Socdaalka Iibsadayaashaada
Qaar badan oo suuqleyda B2B ah ayaa xaddidaya soo-gaadhista shirkadooda macaamiisha mustaqbalka iyagoo diiradda saaraya aragtidooda ah in loo arko inay yihiin iibiye bixin kara badeecada ama adeegga. Waa istiraatiijiyad xaddidan maxaa yeelay iyagu ma horraan wareegga iibsiga.
Haddii ganacsigu uu baarayo caqabadda haysata, qasab maaha inay raadinayaan shirkad ay ka iibiso wax soo saar ama adeeg iyaga u ah. Inta badan heerarka Safarka Iibsashada B2B ayaa kahoreeyay xulashada iibiyeyaasha.
Kiis ahaan; laga yaabee inuu jiro macmiil mustaqbal leh oo ka shaqeeya Teknolojiyada Maaliyadeed oo jeclaan lahaa inuu ku daro khibrad moobil macaamiishooda. Waxay ku bilaabi karaan iyagoo baaraya warshadahooda iyo sida macaamiishooda ama tartamayaashoodu ugu darayaan waaya-aragnimada moobiilka khibradooda guud ee macaamiisha.
Safarkoodu wuxuu ku bilaabmayaa cilmi baaris ku saabsan korsashada mobilada iyo in macaamiishoodu ay u badan tahay inay ka faa'iideystaan ​​suuqgeynta fariimaha qoraalka ah ama codsiyada moobiilka. Markay aqrinayaan qodobbada, waxaad ogaanaysaa inay jiraan la-hawlgalayaal is-dhexgal, wada-hawlgalayaal horumarineed, codsiyo dhinac saddexaad ah, iyo fursado badan.
Waqtigan xaadirka ah, miyaanay ahayn wax cajiib ah haddii meheraddaadu - yaa sameeya isku-dhafnaan adag oo shirkadaha Fintech ah ay goobjoog ka ahaayeen iyaga oo ka caawinaya iyaga inay fahmaan kakanaanta dhibaatada? Jawaabta fudud ayaa ah haa. Maaha fursad aad ku dhiirrigeliso xalkaaga (weli), kaliya waa siinta hagitaan iyaga ka caawiya inay ku guuleystaan ​​shaqadooda iyo warshadooda dhexdeeda.
Haddii aad ku dhistay tilmaamaha ugu dhammaystiran ee ku saabsan aqoonsiga dhibaatada oo aad siisay cilmi-baarista taageerta - rajadu waxay horeyba u fahamtay inaad si buuxda u fahamsan tahay dhibaatadooda, warshaddooda, iyo caqabadaha ay la kulmaan. Shirkaddaadu mar horeba qiimo ayey u laheyd rajada shirkaddiina waa horaantii dhisida maamulka oo ku aaminaysa iyaga.
Marxaladaha Safarka Iibsiga iyo Maktabadda Mawduucaaga
Marxaladahaani waa in lagu daro maktabadaada macluumaadka. Haddii aad rabto inaad horumariso jadwalka taariikhda, laga bilaabo heerarka safarka iibsadayaashaadu waa cunsur muhiim u ah qorshayntaada. Waa kuwan sawir weyn oo ah waxa taasi u eg tahay Gartner's CSO Update:
Marxalad kasta waa in lagu jajabiyaa cilmi baaris ballaaran si loo hubiyo in maktabaddaada mawduucu ay leedahay bogagga, sawirrada, fiidiyowyada, daraasadaha kiiska, marqaatiyada, liisaska hubinta, xisaabiyaha, jadwalka waqtiga associated wax kasta oo la xiriira siinta iibsadahaaga B2B macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u caawiyaan.
Maktabadaada buugaagta waa inay ahaato mid si wanaagsan loo abaabulay, si fududna loo raadsan karo, si joogto ah loo calaamadeeyay, si kooban loo qoray, leh cilmi baaris lagu taageerayo, laga heli karo dhexdhexaadinta (qoraalka, sawirada, fiidiyowga), badankoodna loogu talagalay mobilada, isla markaana ay muhiimad u leeyihiin iibsadayaasha aad tahay raadinaya.
Hadafka guud ee dadaaladaada suuqgeyntu waa inuu noqdaa in iibsadahaagu hormarin karo inta ay jecelyihiin safarka iibsadaha isagoon ubaahanayn inaad laxiriirto shirkadaada. Rajada waxay rabi doontaa inay si guud uga gudubto marxaladan iyada oo aan lagaa caawin shaqaalahaaga. Inta aad soo bandhigayso shaqaalahaaga marxaladaha hore waxay noqon kartaa mid faa'iido leh, had iyo jeer suurtagal maahan.
Ku darista dadaalada suuq geynta omni-channel waxay muhiim u tahay awoodaada inaad ku xirto ganacsigan. Haddii rajadaadu aysan awoodin inay hesho caawimaadda ay u baahan tahay si ay ula socodsiiso una hormariso safarkooda, waxaad u badan tahay inaad lumiso qof tartame ah oo sidaas sameeyay.
Tags: b2bsafarka iibsadaha b2bsafarka macaamiisha b2bsafarka iibsadahaabuurid is afgaradcusboonaysiinta csoSafarka macaamiishagartneraqoonsiga dhibaatadadhismaha shuruudahasahaminta xalkaansaxinta xalkaxulashada alaab-qeybiye